तबल बढ्दैन, महँगी बढेको बढ्यै ! « Drishti News – Nepalese News Portal
तबल बढ्दैन, महँगी बढेको बढ्यै !
समग्रमा तलब तथा ज्याला वृद्धिको सूचकांक गतवर्षको माघभन्दा पनि अहिले धेरै कम हो । गत माघ महीनामा उक्त सूचकांक ७ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको थियो । यसअवधिमा ज्याला भने करीब मूल्यवृद्धिको नजीक आउन खोजेको देखिन्छ तर पनि सोही अनुपातमा छैन । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा यो समाचार ममता थापाले लेखेकी छन् ।